Sida loo ilaaliyo jeeriga la dareemay ee ka soo cayayaanka iyo cudurrada
Cherry (Prunus tomentosa) waa geed geed dheer oo ku yaal bariga qorraxda kaas oo koraaya wax ka sarreeya seddex mitir dhererka. Sababtoo ah ubax hore ubax iyo miraha yar yar ee koray ee growers ee Russia, Ukraine iyo Belarus. Miraha of jeeriga qalqallan yihiin aad u yar yar jeeriga caadiga ah, laakiin ku dhowaad lahayn acid ma waxay ku guuleysteen jacayl caalami ah.
Tifaftirka iyo sawirada noocyo waaweyn oo jalaatada ah
Cherry waa subgenus ah ee dhirta ee cirifka Plum ka soo qoyska Pink. Waqtigan xaadirka ah, curiyayaasha ayaa ka jaray Beelaha Guutada iyo jeeriga, kuwaas oo lagu gartaa caabbinta dhaxan iyo cudurada, iyo sidoo kale miro waaweyn. Kala duwanaanshaha ugu weyn ee jeeriga waa Miracle Cherry. Ma taqaanaa? Gerrigii ugu horeeyay ee laga soo bilaabo Aasiyada Yar-yar ilaa Rome waxaa soo saaray taliyaha iyo milkiilaha addoonta Lucull.
Iyadoo aan cherry, waa adag tahay in la qiyaaso beerta dhabta ah. Ku dhowaad goob kasta oo aan ku koraan cherry beerta. Iyo inta badan ma aha mid geed, laakiin dhowr ah. Miro of cherry waa delicious, caafimaad leh, beduliyadeed, oo leh dhadhan macaan oo macaan, oo la yaqaan badan tan iyo carruurnimada. Intaa waxaa dheer, Cherry ayaa ku qurux badan oo eegaya dhammaan geedo midho leh.
Si aad u beerato jeeriga beerta, kaas oo sannad walba ku farxi doona dalagyo badan, waxaad u baahan tahay inaad qaadato hab masuuliyad u leh doorashadiisa. Oo waa inaadan bilaabin inaad raadiso macluumaad ku saabsan sida weyn iyo macaan miro geedkii aad jeceshahay, laakiin inaad fiiro gaar ah u yeelato calaamadaha noocan ah sida iska caabinta barafka, u nugulaanta cudurada iyo dulin, xasilooni iyo muddeynta.
Kaabashashada jeeriga la dareemay: sifooyinka beeritaanka iyo daryeesha geed baadiyaha ah
Xardhanka ayaa la isku haystaa dalagyada dalagga. Waxay isku duubi karaan cirifka, boodhka, boodhka, iyo khudradda. Waxaa lagu qaddariyaa bannaanka u ah Bisaylkiisa hore ee miraha, dhalidda degan, caabinta barafoobay iyo guryaha qurxinta aad u fiican. Geedka jilicsan waa ay fududahay in la beero oo la joogteeyo, laakiin waxay u baahan tahay adeecad adag oo ku aaddan dhaqannada beeraha ee bannaanka.
10 noocyo hore loo yaqaano jeeriga oo leh sharaxaad iyo sawir
Cherry - dhaqanka beerta caanka ah ee ugu badan ee ciriirigeena. Caucasus iyo Crimea waxaa loo tixgeliyaa meesha uu ku dhashay ee geedkan. Waa wax aan qabyo ahayn, oo ku kordha xaalad kasta, oo ay ku jirto degmada dhagaxa. Si kastaba ha noqotee, xaaladaha ugu wanaagsan ee kobcinta iyo fruiting waa carrada bacrimiya iyo qoyaanka. Waad ku mahadsan tahay shaqada beeraha warshadaha, johrigu wuxuu yeelan karaa dhadhan iyo midab kala duwan, noocyo kala duwana waxay ku kala duwan yihiin xoogga koritaanka geedaha iyo marka loo eego midhaha.
Qodobbada waxtarka ee johanneska ee jirka bini'aadamka
Cherry waa miro aad u jecel badan oo badan, laakiin dhammaantood ma qadarinayaan sifooyinka faa'iidada leh ee tan la socota dhammaan berry. Maqaalkani wuxuu kuu sheegi doonaa sida loo isticmaalo berri loo daaweeyo iyo sida saxda ah ee cherry ay u tahay faa'iido jirka, waxaan sidoo kale tixgelinaynaa su'aasha lafaha cherry, waxyeeladooda iyo faa'iidooyinkooda. Kalooro Cherry ah iyo halabuurka Cherry waa xubin ka mid ah qoyska Rosaceae, leh jilif midab leh cawl-brown iyo a taajkii ka faafin.
Geedo Guga - Xeerarka loogu talagalay Bilowga
Su'aasha ah ee jeeriga gooyaa ee guga waa mid ka mid ah muranka ugu badan ee bannaanka u khibrad iyo kuwa bilowga ah. Kama dambaysta kuma dhicin in ay jebiyaan laanta, maxaa yeelay waxay ka baqayaan inay waxyeeleeyaan dhalidda iyo daciifinta geedka. Beeraha xirfadlayaashu waxay tixgeliyaan arrintan macquulnimada mana fahmin sababta dad badani dayaceen nidaamkan muhiimka ah.
Sida loo badbaadiyo cherry xilliga qaboobaha: noocyo kala duwan oo banaan
Gorma waa mid ka mid ah ugu caansan, dhadhan fiican leh oo caafimaad qaba ee beerahayaga. Goynta xilliga qaboobaha ma sameyn karto iyagoon lahayn. Cuntooyinka badankood ee ilaalinta jeeriga ee xilliga jiilaalka waa kuwa qoyska oo la dhaxlo. Laakiin waxaa laga yaabaa inuu qof ogaado wax cusub ee diyaarinta jeeriga. Waxaa jira siyaabo dhowr ah oo loo kaydiyo jeeriga xilliga qaboobaha: keydinta oo dhan, "fitamiin", qalajinta, qalajinta, miraha candiedka ah.
Astaamaha iyo sifooyinka beeraha ee cherry "Turgenevka"
Fikradaha kala duwan ee beerta, cherry "Turgenevskaya" wuxuu ku faanaa meel sare, gaar ahaan, doodda sharaxaadda noocyada: waxay soo diraan sawirrada geedahooda, oo ka tago dib u eegis badan iyo talooyin ku saabsan miraha casiir koraya. Waxaan sidoo kale ka fekereynaa sida loo kobciyo sida cherry ee beerta our. Cherry "Turgenevka": Qeexida noocyada kala duwan Kala duwanaanta caleenta "Turgenevka" wuxuu soo muuqday sannadkii 1979, sababtoo ah dhowr sano oo shaqo ah oo ah caleemaha iyo dhowr sano ayaa noqday mid ka mid ah kuwa ugu caansan ee ka mid ah dadka degaanka xagaaga iyo beerta.
Cherry noocyo of dareemay leh sharaxaad iyo sawir
Kafaarin waa geed geed duur-joog ah oo gaadhaya laba mitir oo dherer ah. Waxay leedahay caleemo ballaaran oo dhaadheer leh ama yar yar, caleemaha qoyan iyo caleemaha gaduudan oo casaan ah oo ku dhegsan laanta ku wareegsan. Geedka geedkani sidoo kale wuxuu u adkaystaa cayayaanka iyo cudurada, inkastoo, sida noocyo badan oo kale, waxay u nugul yihiin weerarrada kookaha.
Horumarinta cherry seedless beerta, talooyinka ugu fiican ee beerto iyo daryeelka
Chess sandstone sandstone waxay ka timid Waqooyiga Ameerika. Halkan waxay ku koraan bangiyada wabiyada iyo harooyinka, mararka qaarkoodna waxaa laga heli karaa jilbaha. Dufan Bessey duurka waxay noqon kartaa quruxda ugu weyn ee dhismaha beerta. Thanks to a cherry fruiting deeqsi ah ayaa muddo dheer ku guuleystay kalsoonida beeraha badan oo dunida oo dhan.
Cherish ama Duk: sida loo abuuro oo u koro
Dhadhanka macaan ee jeeriga iyo iftiinka jiirka ee berry hal weyn - sida isku dhafan, marka laga reebo riyo ah, waa botanist inveterate. Laakiin dabiiciga ah, wax walba waa suurtagal, iyo xataa si ka badan sidaas darteed haddii loo tarxiilay si loo hagaajiyo pollination random ah. Sidaas darteed, bannaanka loo siiyey fursad ay ku kobciyaan dyuk ama, sida loogu yeedho, dheriga.
Cherry "Black weyn": sharaxaad, soo degid iyo ka tagid
Waxaa ka mid ah noocyada kala duwan ee geedo midho leh waa in la muujiyo cherry. Waxa kaliya ee aan ka samaysan berry ee geedkan: compotes, cabitaanada miro, jamsi iyo jamsi waxay muddo dheer noqdaan naadeerka caadiga ah ee jikada ee hostess kasta. Intaa waxaa dheer, maraqa macaan iyo casiir badan ayaa loo isticmaalaa in lagu qurxiyo keega ama buuxinta caano, bur-burka iyo suxuunta kale.
Dhadhaminta tartiib tartiib ah, midab qurux qurux leh oo qurux badan, caraf sharaf leh - waa wax walba oo ku saabsan tincture cherry caan ah oo dhan adduunka oo dhan. Waxaa jira dhowr cuntooyin aasaasiga ah oo loogu talagalay hudheelka guriga: Liwada khamriga caadiga ah iyo tincture oo aan khamri ahayn. Selection of berry Ma jiraan wax shuruudo adag ee doorashada ee berry cherry, ku dhowaad nooc kasta oo ku habboon yahay.
Cherry "besseya": sida loola tacaalo cudurada iyo cayayaanka ee cherry ciid
Waxaa ka mid ah noocyo badan iyo noocyo geedo ah oo si sahlan loo heli karo goob kasta oo dacha ah, way sahlan tahay in la arko jeeriga ciidda ama, sida badanaa loo yaqaan, "Bessey" jeeriga. Si ka duwan noocyada kale duwan, dhirta waxaa lagu soo bandhigay qaab ah geedo badan oo dhir ah ilaa 1.5 mitir sare. Iyada oo ku xiran da'da, qaabka taajka waa kala duwan yahay, inkastoo lafdhabarta, ciriiriga ah ee warshad dhalinyaro ah, taas oo ah midab casaan, iyo sidoo kale maqaar, caleemaha adag, had iyo jeer kala soocaan inta ka hartay dhirta beerta.
Cherry Zhukovskaya tixgeliyey taranta taranta. Kala duwan waa mid aad u weyn waxaana inta badan laga helaa sirqoollada beerta. Cherry Zhukovskaya, sharaxaad ka mid ah kala duwan oo leh sawir mawduuc oo kaas oo la siin doono waqti dambe maqaalkan, sida ku cad dib u eegista waxay leedahay tayada dhadhanka u fiican. Wax-soo-saarka marwalba way badan tahay, mana jirto baahi loo qabo in lagu isticmaalo dadaal gaar ah si loo daryeelo geed khudradeed.
Waxaa jira tiro aad u badan oo kala duwan oo ah jeeriga, kuwaas oo ah caan ku ah aagagga cimilada kala duwan. Maqaalkeena waxaa loogu talagalay "Lyubskaya" cherry, kaas oo lagu beeray beeraha Russia tan iyo 1947. Aan ka hadalno sida loo doorto oo loo beero sapling, aynu la tashanno daryeelka, faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka kala duwan. Tilmaamahan Goobta doodda "Lyubskaya" waxay ka bilaabataa sharraxaad kala duwan.
Cherry "Ural Ruby" waa baadiyaha yaryar ee gaadhaya dhererka hal mitir iyo badh. Sawirro dhowr ah oo ah cherry this waxaa lagu soo bandhigay maqaalka. Kala duwanaantan ayaa leh wax-soo-saarka wanaagsan waxayna sidoo kale la qabsan kartaa xaaladaha cimilada adag. Cherry loo qaato kala duwan yihiin ubax goosashada, miraha wanaagsan oo isku wada dhafan.
Secretarka ah ee beerashada guul leh ee cherry "Frost"
Morozovka waa nooc macmacaanka ah ee cherry caan ka mid ah beerta. Dhaqanka waxaa lagu gartaa caabbinta barafka sare, goosashada qani ku ah iyo dhadhanka ugu fiican ee berry. Waxaan kugula talineynaa in aad barato qaddiyadaha Morozovskaya cherry, iyo sidoo kale gebogebada beerto iyo daryeelidda dalagga. Taariikhda ah Cherry "Frost" - noocyo yar oo miro iyo noocyo berry ah, oo ka soo jeeda Michurinsky Research Research Institute ee 1997.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Cherry 2020